Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Jabuuti oo Soomaaliya Eedaysay.
Dowlada Jabuuti oo Soomaaliya Eedaysay.
Posted by Dulmane	/ August 2, 2018
War qoraal ah oo kasoo baxay safaarada wadanka Djabuuti ee wadanka Somalia ayaa aad loogu dhaliilay socdaalkii madaxwaynaha Somalia Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee wadanka Eritrea.
Hadalka safiirka oo calaacal aad ubadan uu kamuuqday ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu aad ugu fududaaday codsigii uu Qaramada Midoobay (QM) u diray ee ahaa in cunaqabataynta laga qaado wadanka mudada go’doonka kujiray ee Eritrea.
Safiirka Djabuuti ee Somalia ayaa qoraalkiisa kusheegay in dhulkii Jabuuti ay haysato Eritrea isla markaana labada wadan ay dhex taalo colaad wayn waa Jabuuti iyo Eritrea e, wuxuuna safiirku ku calaacalay in Somalia ay ahayd in ay jirto dhinaca Jabuuti.
Safiirka Djabuuti ee Somalia ayaa sheegay in dhalintii wadanka Jabuuti ay difaacayaan wadanka Somalia islaarkaana ay Jabuuti ka go’antahay nabadaynta Soomaaliya. Wuxuuna safiirku sheegay in uusan filaynin in Somalia ay lasafato wadan kale.
Madaxwaynaha Somalia Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Safar lama filaan ah kutagay wadanka Eritrea kadib markii booqasho lama filaan ahayd uu dalkaas kutagay Raysalwasaaraha cusub ee Gumaysiga Itoobiya, waxayna dadka soomaaliyeed iswaydiinayaan waxa booqashada Farmaajo xiligan kusoo aadiyay.